Bakhala ngamajoyinti eSobantu | News24
Bakhala ngamajoyinti eSobantu
ISITHOMBE: nokulunga ngobese UNksz Busi Mbokazi ekhomba enye yezindawo esiphenduke isidleke sezidakamizwa eSobantu.
UBUHOLI bomphakathi baseSobantu sebuthule ngokusemthethweni umkhankaso wokuqwashisa ngophuzo oludakayo nokusetshenziswa kwezidakamizwa kubafundi besikole.
Lo mkhankaso othulwe ngoLwesithathu olwedlule kuhloswe ngawo ukuqwashisha abafundi ngobungozi bokuzibandakanya nophuzo nezidakamizwa, okusolwa ngokuba nomthelela ekwehleni kwemiphumela kamatikuletsheni eSobantu Secondary ngonyaka odlule, njengoba­ namajoyinti ethe chithi saka kuleli lokishi.
Ekhuluma nephephandaba i-Echo, omele ihhovisi le khansela uNksz Busi Mbokazi uthe babone ukuthi baqale lo mkhankaso ekuqaleni konyaka, abahlose ngawo nokuthi basebenzisane nabanikazi bezindawo zokucima ukoma, ukuqinisekisa ukuthi abafundi abangaphansi kweminyaka egunyaziwe abangeni ezindaweni zokucima ukoma.
“Noma singasho ukuthi siphikela othisha, kodwa sinesiqiniseko ukuthi bekwenziwa konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi abafundi bakamatikuletsheni bathola ukulekelelwa ngendlela efanele.
“Siyasola ukuthi nezindawo zokucima ukoma zibe nomthelela njengoba eziningi zazo bezinemicimbi eminingi yobumnandi sekusondele ukuthi kubhalwe izivivinyo. Uma singalungisa izimo eziyizithikamezi kubantwana bethu emiphakathini esiyakhele, nakanjani kungaba noshintsho ngisho nasesikoleni.
“Ziningi izinhlaka esizimisele ukusebenzisana nazo ukuqhuba lo mkhankaso okubalwa kuzona ngisho namaphoyisa imbala. Siyafisa amaphoyisa asilekelele ngokuthi agasele izikole kungazelele muntu ukubheka izidakamizwa. Kunezinkulumo mpikiswano esizoba nazo nabafundi lapho esizobe sikhuluma ngobungozi bokusebenzisa izidakamizwa”.
Kuthiwa kuleli lokishi uudayiswa nokusetshenziswa kwezidakamizwa kwenzeka esidlangalaleni.
“Kunendawo eyayisetshenziwa njengezitolo kudala engasasebenzi manje okuyiyona esijike yaba isidleke sezidakamizwa.”
UMbokazi uthe bazokhulumisana nabanikazi bamajoyinti endaweni, ukuze babuyekeze imithetho yabo ngendlela yokuthi kungaphazamiseki ukufunda nokuthi abafundi abangaphansi kweminyaka egunyaziwe ukuphuza utshwala bangavunyelwa.